Muujin la'aanta 777-200ER ka dib markii lagu soo rogay xirmo kama dambeys ah.
Su'aal Muujin la'aanta 777-200ER ka dib markii lagu soo rogay xirmo kama dambeys ah.
1 sano 8 bilood ka hor #794 by maxkamad
Ka dib markii lagu xiro 7770200ER FSX FSX, muraayadaha ayaa dhammaantood ka madhxinaya barkada iyo bambalka fiilooyinka.
1 sano 8 bilood ka hor #795 by Dariussssss
Qalad aad u caansan. Waxaad ubaahantahay inaad ku rakibto qalabka dib u soo kabashada. Waxaad ka heli kartaa halkan Rikoooo. Waa qalab rakibaba sidaas, wax walba si fudud ayey u socdaan.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: maxkamad
1 sano 8 bilood ka hor #798 by maxkamad
"Qalabka Dib u soo celinta Qalabka" ma caawineynin dhibaatada. Waxaan ka fakarayaa inaan dib u cusbooneysiiyo 777-200ER ama malaha FSX oo idil.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.201